ဦး နှောက်ပေါ်ကလိင် - အင်တာနက် Porn အကြောင်း ဦး နှောက်ပလပ်စတစ်ကဘာကိုသင်ပေးသလဲ (၂၀၁၄)၊ Norman Doidge, MD - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်က Porn အကြောင်း
ကောက်နှုတ်ချက်: ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ပတ်သက်သောလူမှုရေးဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်သမိုင်းနှင့်အခြားမတူဘဲလိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအတွင်း ၀ င်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ Clinician အနေဖြင့်မည်သည့်အကြောင်းအရာများကိုမျှမသိရှိသေးပါ၊ အရသာကညစ်ညမ်းမှုကိုလွှမ်းမိုးနေပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထိတွေ့မှုအဆင့်ဟာအတော်လေးအသစ်အဆန်းဖြစ်နေလို့ပါ။ ဤလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်အရသာများသည်အပေါ်ယံသာဖြစ်လိမ့်မည်လော။ ဒါမှမဟုတ်ညစ်ညမ်းတဲ့ဇာတ်လမ်းအသစ်တွေကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတွယ်ကပ်နေမှာလား။ ”
6 ဇူလိုင်လ 2014 - Norman Doidge ရဲ့မူလဂျာနယ်ဆောင်းပါးနဲ့လင့်ခ်လုပ်ပါ
ကျွန်တော်တို့သည်သမိုင်း၌မဆိုအခြားမတူပဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာအရသာအတွက်တော်လှန်ရေးအလယ်၌မကြာသေးမီကဗြိတိန်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထဲမှာအစွမ်းထက်, ဖှယျမြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်ဖမ်းမိကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အပေါ်ဖျော်ဖြေခံတစ်ဦးကလူမှုရေးစမ်းသပ်မှုဖြစ်ကြ၏ InRealLife, Baroness Beeban ကေဒြုန်ဒါရိုက်တာဆယ်ကျော်သက်ပေါ်တွင်အင်တာနက်များ၏ဆိုးကျိုးများအကြောင်း။
ရုပ်ရှင်များတွင်အထင်ကြီးရိုးသားတစ် 15 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်သည်အဘယ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏ 24 /7လက်လှမ်းနေဖြင့်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းအတွက် shaped လျက်ရှိသည်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများသန်းပေါင်းများစွာ၏ဘဝအသက်တာ၌ပေါ်မယ့်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကို articulates ။ သူကညစ်ညမ်းပုံရိပ်များသူ၏ "စစ်မှန်သောဘဝ" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပုံသွင်းခဲ့ကြပုံကိုဖော်ပြထားတယ်:
"သင် ... သင်သူမကိုအတိအကျကိုသင်အင်တာနက်အပေါ်ကိုမြင်လျှင်တတူလိုချင်ပါတယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးထွက်ကြိုးစားသင်အင်တာနက်အပေါ်စောင့်ကြည့်ပြီးပြီဘယ်အရာကိုတစ်စုံလင်သောပုံရိပ်ကိုရချင်ပါတယ် ... ငါသည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖန်ဆင်းသောသူမည်သည်ကားဖို့အလွန်အမင်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ် , သူတို့သည်အခမဲ့ပါပဲ, ဒါပေမဲ့တခြားအာရုံ၌မတ်ေတာ၏တပြင်လုံးကိုအသိပျက်စီးရဲ့။ ငါကတကယ်တော့မိန်းကလေးတစ်ဦးမှတစ်ဦးကွန်နက်ရှင်ကိုရှာဖွေဘို့ယခုဒီတော့ခက်မယ့်ရှာတွေ့သောကြောင့်, ဒါဟာငါ့ကိုနာကျင်။ "
အဘယ်သို့အခင်းဖြစ်ပွားရာအကြောင်းကိုဒါဖှယျသောသူမူကားလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာတစ်ခုချင်းစီ other.Meanwhile ထံမှ dissociated သည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာနှင့်ရင်ခုန်စရာ Long ဖြစ်လာကြပြီရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးဘယ်လိုကျနော်တို့ကဒီနှင့်ထိုကဲ့သို့သော၏အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်နေသောမိန်းကလေးသည်အခြားဇာတ်ကားတွေထဲကနေလေ့လာသင်ယူနေသည် ယောက်ျားလေးများ, သူတို့ကညစ်ညမ်းကရေးသား "အခန်းကဏ္ဍ" ကစားသောမြော်လင့်သောသူတို့အဖို့အပေါ် "ကိုဒေါင်းလုဒ်" ပါပြီ။
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲ porn ၏ဝိရောဓိတဦးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ခဲယဉ်းသူ့ကိုမိန်းကလေးတစ်ဦးတို့ကဖွင့်မဟုတ်, ပိုမိုလွယ်ကူခံရဖို့အဘို့လုပ်သင့်သလဲ ပြီးတာနဲ့ porn အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်မျှော်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှု, စူးစမ်းလေ့လာပြင်ဆင်မှသက်သာရာရစေရန်ဆယ်ကျော်သက်များကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယနေ့တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပြင်ဆင်ထားရန်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲကြောင့် supplant ဖို့မညစ်ညမ်းစေ porn သစ်, အင်တာနက်-based ပုံစံများနှင့် ပတ်သက်. အရာတစ်ခုခုလည်းမရှိ။ အတော်များများကလုလင်တို့သည်ပင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကူညီပြီးအတူလိင်နှင့်လူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံရေးကပိုနှစ်သက်ပြောကြပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်ဤမိန်းကလေးတစ်ဦး "get" ကိုမရခဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအဆင့်ဆင့်အတွက်အနိမ့်ယောက်ျားလေးများ၏အပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းကြသည်။ ဒါပေမဲ့တချို့, ရုပ်ရှင်အတွက်တတ်နိုင်ဆယ်ကျော်သက်လိုပဲသူတို့လုပျတဲ့အခါမှာမိန်းကလေးတစ်ဦး, "" ထားနိုငျသော်လည်း, သူတို့ရဲ့လိင် "ညာဘက်ကိုအလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိ" ကြောင်းရှာပါ။
ထိုလုလင်ရဲ့တိုင်ကြားစာတဲ့လှည့်ကွက်နှင့်အတူဆိုသော်ငြား, တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်လက်စွပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အလယ်ပိုင်း 1990s ငါနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်မှာတော့အောက်ပါပုံစံကိုသတိထားမိလာတယ်။ အဆိုပါပုံမှန်ဥပမာလန်းလာသောအင်တာနက်ပေါ်မှာညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုစပ်စုရတဲ့ဖော်ပြထားသူတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာဆက်ဆံရေးအတွက်, တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးပါလိမ့်မယ်။ အများစုမှာက်ဘ်ဆိုက်များကိုသူငြီးငွေ့စရာတွေ့သော်လည်း, သူသည်မကြာမီသူကသူတို့ကိုစွဲလမ်းစတင်ခဲ့သောအချက်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အများအပြားသတိပြုမိသည်။ ပိုသူကပိုသူလိုသည့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါပြဿနာကိုအင်တာနက်သုံးစွဲရုံအချိန်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ယခုသူတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောသို့မဟုတ်အပြောင်ဒီဂရီရန်, နောက်ဆုံးမှာသည်သူ၏ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်ထိခိုက်သောညစ်ညမ်းတဲ့ကြင်နာများအတွက်အရသာဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဤသူသညျ, အခြေခံကျကျနုလူမှုရေးအရအဆင်မပြေ, ဒါမှမဟုတ်အစစ်အမှန်မိန်းမနှင့်ဆက်ဆံရေးများအတွက်အစားထိုးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဧရာမညစ်ညမ်းစုဆောင်းခြင်းစကမ္ဘာမှဆုတ်ခွာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောယောက်ျား, ယေဘုယျအားဖြင့်စဉ်းစားဟန်မဟုတ်ဘဲသာယာသော ရှိ. , ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင်မြင်သောဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၌တည်၏။ မဟုတ်သလိုသူတို့စွဲလမ်းခဲ့။ ပုံမှန်အားဖြင့်, လူသူသညျမိမိညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြည့်, အင်တာနက်အပေါ် ပို. ပို. အချိန်ဖြုန်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း, အီပြောပြနဲ့အတူသတင်းပို့လိမ့်မယ်။
သို့သော်အများဆုံးဒီကဗျာသူတို့နေဆဲသူတို့ကိုဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျဆွဲဆောင်မှုစဉ်းစားသော်လည်း, သူတို့ရဲ့အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်, အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိန်းကလေးများကဖွင့်ခံရမှာသူတို့ရဲ့တိုးမြှင့်အခက်အခဲများစွာနီးပါးသွားတာအတွက်, သူတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာများခဲ့ကြသည်။ ငါမေးတဲ့အခါဒီဖြစ်စဉ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုဖို့မဆိုဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့ပါလျှင်, သူတို့ကကနဦးကသူတို့ကိုလိင်စဉ်အတွင်းပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားရအကူအညီပေးခဲ့ပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းဖြေသည်။ အခုတော့အစားအိပ်ရာများတွင်ဖြစ်ခြင်းကိုခံစားဖို့သူတို့ရဲ့အာရုံကိုသုံးပြီး၏, ပစ္စုပ္ပန်အတွက်, သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်အတူ lovemaking ပို. ပို. သူတို့တစ်တွေ porn script ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း fantasize သူတို့ကိုလိုအပ်သည်။ တချို့က - အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးနဲ့တူ InRealLife - porn ကြယ်များကဲ့သို့အပြုမူဖို့သူတို့ရဲ့ချစ်သူများစည်းရုံးဖို့ကြိုးစား, သူတို့သည် "မေတ္တာအောင်" ကိုဆန့်ကျင်အဖြစ် "fuck ဆိုတဲ့" တွင် ပို. ပို. စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဘဝများ ပို. ပို. ဒါကြောင့်စကားပြောဆိုရန်သူတို့ခဲ့သောကးကလွှမ်းမိုးသူတို့၏ဦးနှောက်သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်, ဤအသစ်သော script များမကြာခဏပိုပြီးစရိုက်နှင့်၎င်းတို့၏ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထက်ပိုမိုအကြမ်းဖက်ကြ၏။ ငါသည်ဤလူတို့သညျရှိခဲ့မည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတီထွင်ဖန်တီးမှုသေဆုံးနေသောအထင်အမြင်တယ်သူတို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အဘယ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ porn ကဖွဲ့စည်းနေသောဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မတူဘဲဤလူတို့သညျကျောဘက်မှာလဲယခင်အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့သညျ။ ယနေ့များ၏ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများကိုမကျင့်, ဤကဒီစာစီစာကုံးအပေါ်သို့အချို့အလင်းကိုသွန်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်လူမှုရေးစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
လိင်အရသာတိကျစွာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မပြောင်းလဲ, ဘုံအသိ၏မျက်နှာ, လိင်တတ်ပြီးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များ၏ထုတ်ကုန်ကြောင်းပြောဆိုသောကြောင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိတ်ပညာရှင်တို့ကဖန်ဆင်းထားတဲ့အငြင်းအခုံအတွက်အချို့သောအဘို့, ပျံစေခြင်းငှါစိတ်ကူး ၎င်း၏ "ဝါယာကြိုး" - - အဖြစ်ကောင်းစွာသမျှသောအချိန်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မပြောင်းလဲသည်ဦးနှောက်နှင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုလို့ပဲ။ သို့သျောကြှနျုပျတို့မကြာသေးမီကဦးနှောက်အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်ပေမယ့်ပြောင်းလဲနေတဲ့နေဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မသာကြောင်းသိရှိခဲ့ပွီ။ ဦးနှောက်က၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်သောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ဝေါဟာရကို "neuroplasticity" ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကတုံ့ပြန်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ "Neuro" အာရုံခံဆဲလျအဘို့ဖြစ်၏, နှင့် "plasticity" ပျော့ပြောင်းလဲ, ချက်နဲ့၏သဘောအရပလပ်စတစ်ဆိုလိုသည်။ အဆိုပါဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်၏သော့ချက်ရှုထောင့်ဝေးကွာသောဘိုးဘေးတို့ကဲ့သို့များများစားစားဖြစ်ကြောင်းမှန်ကန်သောပါ၏ ဒါပေမဲ့သူတို့ကမကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်ကနေအကြီးမြတ်ဆုံးဆုကျေးဇူးလူ့ဦးနှောက်၏အများဆုံးကွဲပြားပိုင်ဆိုင်မှု၎င်း၏ plasticity ၏အတိုင်းအတာကြောင်းထွက်ကျန်ခဲ့ပါပြီ။
Neuroplastic အပြောင်းအလဲတွင် neuron အတွက်ဦးနှောက်အတွင်းပိုင်းတစ်ဏုအဆင့်မှာပေါ်တတ်၏။ ဒါပေမယ့်ပင်ရှည်လျား neuroplasticity ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်မတိုင်မီသတိထားလေ့လာသူများလူသားတွေကအခြားသတ္တဝါများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ plasticity တစ်ခုထူးခြားသောဒီဂရီပြသိနားလည်ကြ၏။ ကျနော်တို့နေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ကြိုက်တယ်ဘာခြားနားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေငါတို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုခံစားဘယ်မှာကျနော်တို့ခြားနားသည်။ သို့သော်အပေါင်းတို့၏အများဆုံးကျနော်တို့ဘယ်သူကိုဒါမှမဟုတ်ဘာကျနော်တို့မှဆွဲဆောင်နေကြတယ်အတွက်ခြားနားသည်။ ပြည်သူ့မကြာခဏသူတို့ဆွဲဆောင်မှု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး "turn-on" ဟုအထူး "အမျိုးအစား" ကိုရှာဖွေလို့ပြောနှင့်, ဤအမျိုးအစားများကိုလူတစ်ဦးကနေလူအများကြီးခြားနားသည်။
သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောကာလကိုဖြတ်သန်းသွားနှင့်အသစ်အတွေ့အကြုံများရှိသည်အဖြစ်အချို့သောအဘို့, အမျိုးအစားများကိုပြောင်းလဲ။ တဦးတည်းလိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားသည်ထို့နောက်အခြားကနေသူတို့နှင့်အတူ, တဦးတည်းပြေးပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတစုကနေယောက်ျားနှင့်အတူအဆက်ဆက်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကာလအတွင်းသူသာလက်ရှိအချိန်တွင် "ပူ" သောအုပ်စုတွင်လူတို့အားဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ တဦးတည်းကာလအတွင်းခဲ့ပွီးနောကျ, သူသည်နောက်တဖန်အဟောင်းအုပ်စုတစ်စုကနေလူကိုဆွဲဆောင်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ သူကအမြန်ဆက်ခံအတွက်ဤ "အမျိုးအစားများကို" တစ်အရသာဝယ်ယူနှင့်တစ်ဦးချင်းအားဖြင့်ထက်လူတစ်ဦး၏အမျိုးအစားသို့မဟုတ်အမျိုးအစား (ဆိုလိုသည်မှာ "အာရှသား" သို့မဟုတ် "အာဖရိက-Americans တွေ") တို့ကပိုပြီးရှုံးသလိုပဲ။ အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပညာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းတွေ့ဆုံများ၏သမိုင်းများကပြောင်းလဲ, လူ့လိင်စိတ်တစ် hardwired, လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုဇီဝတတ်ပြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်သေအချာအပွောငျးအလဲနိုင်: ဤလူသားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ၏ပလတ်စတစ်အထွေထွေအမှန်တရား ပို. ။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်စိတ်လည်း finicky နိုင်ပါတယ်။ အများကြီးသိပ္ပံနည်းကျအရေးအသားမဟုတ်ရင်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲစိတ်ကျေနပ်မှုတောင်းဆိုတဲ့ဇီဝဗေဒအလွန်အရေးကြီးသည်တစ်ခုအမြဲဆာလောင်မွတ်သိပ် brute, အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇသရုပ်ဖော် - တစ်အစားပုပ်မအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်။ ဒါပေမဲ့လူသားတွေကပိုအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏နှင့်အမျိုးအစားများမှရေးဆွဲကြသည်နှင့်ခိုင်ခံ့သောဦးစားပေးရှိသည် ဖြစ်. , "တကယ်ဆံပင်ရွှေရောင်နေဖြင့်ဖွင့်" သူလူတစ်ဦး tacitly အနက်ရောင်ဆံရှင်မနှင့် redheads ထွက်မအုပ်စိုးစေခြင်းငှါ: တစ် type ကိုမှဆွဲဆောင်မှုတင်းကျပ်သောကွောငျ့တစ်ဦး "type ကို" ရှိခြင်း, ငါတို့အဘို့အရှာနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုရှာတွေ့သည်အထိကျွန်တော်တို့ကိုကျေနပ်မှုဆိုင်းငံ့ရန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သို့သော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပလတ်စတစ်ဆက်လက်နေဆဲ။ Fetishists တွေဟာသက်မဲ့အရာတွေကိုအလိုရှိကြသည်။ fetishist အမျိုးသားသည်တကယ့်အမျိုးသမီးထက်ဖိနပ်ပါသောဖိနပ်ပါသောဖိနပ်သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးအတွင်းခံအမျိုးသမီးများကပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားနိုင်သည်။ အချို့သောသူများသည်လူအများအားလူတို့အပေါ်စွဲလမ်းမှုနည်းပါးသောရှုပ်ထွေးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစာသားများကဲ့သို့မိတ်ဖက်များကမှားယွင်းသောအမျိုးမျိုးသောပinvolvingိပက္ခများ၊ နတ်ဆိုးစွဲခြင်း၊ သူတို့ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကြော်ငြာတင်တဲ့အခါသူတို့နှစ်သက်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုသူတို့ရှာဖွေနေတဲ့အရာဟာသူတို့သိချင်တဲ့လူနဲ့သူတို့အလုပ်ထက်စာရင်အလုပ်ဖော်ပြချက်နဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာပလတ်စတစ်သည် Neuroplasticity နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိမေးမြန်းရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။ ဦး နှောက်တစ်လျှောက်ရှိ neuroplasticity ရှိကြောင်းသုတေသနပြုချက်ကပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ hypothalamus ဟုခေါ်သောလိင်အပါအ ၀ င်အလိုအလျောက်ပြုမူသောအပြုအမူများကိုထိန်းညှိပေးသည့် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံသည် amygdala ကဲ့သို့စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဖွဲ့စည်းပုံကဲ့သို့ပလပ်စတစ်ဖြစ်သည်။ အချို့သော ဦး ဆုံးစဉ်းစားသကဲ့သို့ Neuroplasticity သည်ရှုပ်ထွေးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုသော ဦး နှောက်၏အချို့သော“ ပိုမိုမြင့်မားသော” အစိတ်အပိုင်းများတွင်စုဆောင်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ တစ် ဦး ဦး နှောက်စနစ်ပြောင်းလဲသွားလျှင်၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောစနစ်များသည်လည်းပြောင်းလဲရမည်။ ဦး နှောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက်ကြွက်သားများနှင့် ပို၍ တူသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ circuit ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက်အသုံးမပြုပါကထိုလုပ်ဆောင်မှုသည်အသုံးမ ၀ င်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောတိုက်နယ်သည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ နောက်ထပ်ကြီးမားသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်လေ့လာသင်ယူချိန်တွင်အာရုံခံဆဲလ်များအကြားဆက်သွယ်မှုအသစ်များဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ အချိန်ကာလအပေါ် အခြေခံ၍ ဖြစ်သည်။ "အတူတူပစ်ခတ်သောအာရုံခံဆဲလ်ဝါယာကြိုး။ " ထို့ကြောင့် Pavlovian လေ့လာမှုကိုရိုးရှင်းစွာလေ့လာရန်အသားကိုခွေးအားမပေးမီအကြိမ်ပေါင်းများစွာခေါင်းလောင်းထိုးပါကမကြာမီခေါင်းလောင်းသံကိုမှတ်ပုံတင်ထားသောအာရုံခံဆဲလ်များသည်တံတွေးကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအာရုံခံများနှင့်ချိတ်ဆက်မိကြသည်။ နောက်ထပ်သိသည့်အချက်မှာခေါင်းလောင်းသံမြည်ခြင်းကတံတွေးထွေးခြင်း၊ အသားသို့မဟုတ်အမဲသားကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသည်။ လူငယ်တစ် ဦး သည်အင်တာနက်မှတဆင့်သွားတိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုသူရှာဖွေသည်၊ မကြာမီကွန်ပျူတာသည်လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုတစ်ခုအနေဖြင့်“ sexised” ဖြစ်လာနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ပလတ်စတစ်၊ သူတို့ရည်မှန်းချက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့စွမ်းရည်အတွက်ငါတို့ကို။ ” Freud သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ပလပ်စတစ်ဖြစ်သည်ဟုပထမဆုံးအကြိမ်ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပလေတိုသည်အချစ်နှင့် ပတ်သက်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်လူသား Eros သည်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုယူခဲ့သည်၊ သို့သော် Freud သည်လိင်ဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာပလတ်စတစ်ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာသိနားလည်မှုအတွက်အုတ်မြစ်ချခဲ့သည်။
မိမိအအရေးပါဆုံးပံ့ပိုးမှုများကိုတစ်ခုမှာလိင်ကိစ္စ plasticity များအတွက်အရေးပါကာလသည်သူ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ Freud ရငျးနှီးနှင့်လိင်ကိုချစ်ဖို့အရွယ်ရောက်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုက၎င်း၏မိဘများဖို့ကလေးငယ်ကိုရဲ့ပထမဆုံးအသည်းအသန် attachment များကိုခုနှစ်တွင်စတင်, အဆင့်တခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ သူကသူ့လူနာထံမှသင်ယူနှင့်ကလေးများစောင့်ကြည့်ခြင်းမှ, ထိုအစောပိုင်းကလေးဘဝမဟုတ်ဘဲအပျိုဖော်ဝင်, လိင်နှင့်ရငျးနှီးများအတွက်ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးသောကာလကြီးနှင့်ကလေးများအသည်းအသန်, protosexual ခံစားချက်တွေကိုနိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်း - Crush, မတ်ေတာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ Freud ကတစ်ခါတစ်ရံတွင်လိင်နှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏အကြာတွင်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့အတှေးအပုံဖော်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်လိင်၏အရေးကြီးသောကာလသြဇာလွှမ်းမိုးနေသောကြောင့်သားသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အရေးကြီးကာလ၏စိတ်ကူးတို့သည်သန္ဓေသားအတွက်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်အဆင့်ဆင့်အတွက်ဖွံ့ဖြိုး, ဤအဆင့်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်းလျှင်, တိရိစ္ဆာန်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအသက်အဘို့မကြာခဏလုံလောက်မှုမရှိပေ, ထိခိုက်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းကိုလေ့လာတွေ့ရှိသောသူ embryologists ခြင်းဖြင့်ရေးဆွဲခဲ့သည်။ Freud ထိုကဲ့သို့သောအဆင့်အဖြစ်ကောင်းစွာမွေးဖွားပြီးနောက်လျှောက်ထားလေ့လာသည်။ အဘယ်အရာကို Freud ကျနော်တို့အရေးပါကာလအကြောင်းကိုသိမှညီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစောပိုင်းအဆင့်ဆင့်တွေအကြောင်းကဆိုသည်။ အသစ်ကဦးနှောက်စနစ်များနှင့်မြေပုံများအားတဦးတည်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုထံမှဆွ၏အကူအညီဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးသည့်အခါသူတို့ကအချိန်အတိုချုပ်ပြတင်းပေါက်ဖြစ်ကြသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူမေတ္တာနှင့်လိင်အတွက်ကလေးဘဝသဘောထား၏သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းနေ့စဉ်အပြုအမူတွေအတွက်ရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌အရွယ်ရောက်ပြီးနူးညံ့ foreplay ရှိသည်, သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ရငျးနှီးဆုံးနှစ်ခြိုက်ဖော်ပြတဲ့အခါသူတို့ကမကြာခဏ "ကလေး" သို့မဟုတ် "သူငယ်" တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုခေါ်ပါ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့မိခင်ထိုကဲ့သို့သော "ပျားရည်" နှင့် "သိုပိုင်" အဖြစ်ကလေးတွေ, မိခင်, အစာကျွေး caressing နှင့်သူမ၏ကလေးမြိန်စွာပြောနေတာများကသူ့ကိုချစ်သောစိတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာသောအခါအသက်တာ၏အစောဆုံးလအတွင်းကျလာသောကြောင့်ဝေါဟာရများအဖြစ်သူတို့နှင့်အတူသုံးနှစျလိုဖှယျ၏အသုံးအနှုန်းများကိုသုံးပါ - အဘယ်အရာကို Freud စကားတို့ကို "ပွား" နှင့် "ကြှေးမှေး" တွင်တက်ချုပ်ဖော်ပြနေသည်အနှစ်သာရဖြစ်သောများ၏ပါးစပ်အဆင့်လိင်၏ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးသောကာလကိုချေါ၏။ ကိုခစျြခံရ, ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်တိုက်ကျွေး, စိတ်ပိုင်းစိတ်ထဲမှာဆက်စပ်နှင့်ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးပုံအတွေ့အကြုံကိုအတွက်ဦးနှောက်အတွက်အတူတကွကြိုးနေကြတယ်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှကလေးဆွေးနွေးချက်စကားပြောတဲ့အခါသူတို့အသက်တာ၏အစောပိုင်းအဆင့်သက်ဆိုင်သော၏ရင့်ကျက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များအနေဖြင့်ရွေ့လျား "regressing" Freud သည်နှင့်အညီ, ဖြစ်ကြသည်။ plasticity ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထိုကဲ့သို့သောဆုတ်ယုတ်ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်, ထို့နောက်ကြောင်းအစောပိုင်းအဆင့်၌ရှိသမျှသောအသင်းအဖွဲ့များဖြစ်ပေါ်ကြောင်း unmasking ဟောင်းတွင် neuron လမ်းကြောင်းပါဝငျသညျ။ Regression အရွယ်ရောက်ပြီးသူ foreplay ၌ရှိသကဲ့သို့, သာယာသောနှင့်အန္တရာယ်ကင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်မွေးကင်းစကလေးများရန်လိုလမ်းကြောင်း unmasked ဖြစ်ကြပြီးလူကြီးတစ်ဦးဒေါသကိုဝုန်းဒိုင်းကြဲရှိပါတယ်သကဲ့သို့, ပြဿနာရှိနိုင်ပါသည်။
တောင်မှ "ညစ်ပတ်ပြောနေတာ" ဟုအဆိုပါလိင်အင်္ဂါ၏ကလေးတစ်ဦးရဲ့ရှုထောသဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းပြသ, အဘယ်သူကိုအဘို့အမေကသူ့အောက်ခြေမှာရန်အလွန်နီးစပ်ကြောင်းအပေါက်တစ်ပေါက်အတွက်ဆီးသွားခြင်းအဘို့သူ၏ "ညစ်ပတ်" ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုထည့်သွင်းဖို့ Daddy ခွင့်ပြုထားသောစိတ်ကူး, ကျင်ကြီးစွန်အတှကျအသုံးပွု, ရွံရှာဘွယ်ဖြစ် ။ လိင်၏အပျြောအပါးမဆိုရွံရှာ override ဖို့လုံလောက်တဲ့ပြင်းထန်သောဖြစ်လာနိုင်အောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ plasticity ၏အရေးပါသောကာလပြီးနောက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာတော့ဦးနှောက်, တဖန် reorganises ။
Freud အများအပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနက်နဲသောအရာအရေးပါ-ကာလ fixation အဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပြသခဲ့သည်။ Freud ပြီးနောက်ကျနော်တို့မရှိတော့ကလေးတစ်ဦးရေခဲ-မိဖုရားမိခင်များအားဖြင့်ကြီးပြင်းလူတွေကမကြာခဏတစ်ခါတစ်ရံ "ရေခဲ" ဖြစ်လာခြင်း, မိတ်ဖက်ကဲ့သို့သောလူတွေကထွက်ရှာသောသူမ၏ဖခင်ဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကိုမရရှိနိုင်ယောက်ျားဟောင်းကိုလိုက်ရှာ, ဒါမှမဟုတ်အဖြစ်အဘယ်သူ၏ဖခင်မိန်းကလေးသူမ၏ကျန်ရစ်ကြောင်းအံ့သြသွားကြသည် သူတို့ကိုယ်သူတို့သည်အရေးပါကာလအတွင်းစာနာတွေ့ကြုံတော်မူပြီးမှဘယ်တော့မှကြောင့်, သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ လူအမြားကောက်သော plasticity နှင့်ကလေးဘဝပဋိပက္ခများကိုများ၏ဇွဲ၏စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ (ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားလူငယ်တစ်ဦးသောသူသည်မိမိအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း၏မိခင်အားဖြင့်တို့ကိုလှည့နေစဉ်ဥပမာ) သို့မဟုတ် "MILF" က်ဘ်ဆိုက်များ "ကျွန်မက F-CK ချင်ပါတယ်မိခင်များ" Freud မျှမျှတတ, တောင်းဆိုများစွာသောလူမဖြေရှင်းနိုင် Oedipus ရှုပ်ထွေးသောရှိသည်သောဥပမာများမှာနိုင် - နှင့် များစွာသောလုလင်တို့သည် ပို. သူတို့၏သတိရှိရှိသတိထားမိထက်က "မိခင်" ကိုပူးတွဲနေကြသည်။ ( "ဆယ်ကျော်သက်" နှင့်အတူ "MILF" PornHub နှင့် New Brunswick တက္ကသိုလ်ကနေလူစီယာ O'Sullivan ကလေ့လာမှုအရသိရသည်အသုံးပြုသောနှစ်ခုလူကြိုက်အများဆုံး porn ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများဖြစ်ကြသည်။ )
အရေးပါသောကာလလူကြီးများအတွက်ပုံသဏ္ဍာန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကိုကူညီပေးပါသောစိတ်ကူးကိုဆွဲဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသမိုင်း၏ဤမျှလောက်ထုတ်ကုန်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံဇီဝဗေဒ၏တစ်ခုတည်းကိုသာအကျိုးသက်ရောက်မှုမဟုတ်ကြောင်းလက်ရှိရေပန်းစားအငြင်းအခုံဆန့်ကျင်ဘက်သဖွယ်ဖြစ်နေသည်။ မော်ဒယ်နှင့်ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွဥပမာ - ကျယ်ပြန့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာလှပသောသို့မဟုတ် sexy အဖြစ်မှတ်နေကြသည်။ ဇီဝဗေဒ၏အချို့သောကမ်းနားလမ်းသူတို့မွေးဖွားနှငျ့ခှနျအားကတိပေးထားတဲ့အားကောင်း၏ဇီဝဆိုင်းဘုတ်များ, ပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့လူတွေကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်: တစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသားအရေနှင့်အချိုးကျ features တွေအလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်သည်ရောဂါကနေအခမဲ့အဓိပ်ပာယျ; တစ်ဦး hourglass ပုံအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်မြေသြဇာကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာသက်သေဖြစ်, လူကြွက်သားသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်သူမ၏အမျိုးအနွယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကိုခန့်မှန်း။
သို့သော်ဤဇီဝဗေဒအမှနျတကယျသှဘယ်အရာကိုရိုးရှင်းစွာ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကပြောပါတယ်အခါ, "ငါပထမဦးဆုံးကြောင်းအသံကိုကျွန်တော်ကြားလျှင်သောအခါငါသူငါ့အဘို့ခဲ့ကြောင်း, သိတယ်" အဖြစ်လူတိုင်းမ, ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျရောက်အသံဂီတကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထက်လူသားရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ကောင်းပိုကောင်းတဲ့အရိပ်အယောင်ဖြစ်ခြင်း မျက်နှာပြင်။ နှင့်လိင်အရသာရာစုနှစ်ကျော်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ရုဗင်ရဲ့အလှအပလက်ရှိစံချိန်စံညွှန်းအသုံးပြုပုံနှင့်ဆယ်စုနှစ်၏အရေးပါသောအစာရင်းဇယားကြီးမားခဲ့ကြ Playboy centrefolds နှင့်ဖက်ရှင်မော်ဒယ် voluptuous ထံမှ androgynous မှကွဲပြားကြသည်။ လိင်အရသာသိသာယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတွေ့အကြုံကလွှမ်းမိုးနေသည်နှင့်မကြာခဏဝယ်ယူပြီးတော့ဦးနှောက်သို့ကြိုးဖြစ်ပါတယ်။
အဓိပ်ပါယျအားဖွငျ့မှေးရာပါသော "အရသာ", မတူဘဲသင်ယူနေကြသည် "ရယူအရသာ" ။ တစ်ဦးကကလေးငယ်ကိုနို့, ရေ, သို့မဟုတ်သကြားလုံးများအတွက်အရသာဆည်းပူးစရာမလိုပေ; ဤအခကျြခငျြးသာယာသောအဖြစ်ကိုရိပ်မိကြပါတယ်။ တစ်ကြော်ကျောက်ကပ်အတွက်ဒိန်ခဲ, အီတလီခါးသီးခြောက်သွေ့ဝိုင်, ကော်ဖီ, pâtésများ၏အနံ့, ဆီးဒအရိပ်အမြွက် - ဝယ်ယူအရသာပိုင်းတွင်လျစ်လျူ, မကြိုက်နှင့်အတူတွေ့ကြုံသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်သာယာသောဖြစ်လာရသည်။ သူတို့က "တစ်အရသာဖွံ့ဖြိုး" ရမည်ဟုလူတို့အဘို့အလှနျခပေးဆောင်ကြောင်းအတော်များများခဲဘွယ်စားဘွယ်, သားကဲ့သို့သူတို့ကိုအော့နှလုံးနာသောအလွန်အစားအစာများဖြစ်ကြသည်။
Elizabethan ကြိမ်မှာတော့ချစ်သူများကသူမ၏ချွေးနှင့်အနံ့စုပ်ယူမှီတိုင်အောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူမ၏ဂျိုးကြားတစ် peeled ပန်းသီးကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဘို့အကဘုံခဲ့ကြောင်းဖွင့်ချင်းစီကတခြားခန္ဓာကိုယ်အနံ့ဤမျှ enamored ခဲ့ကြသည်။ သူမသည်သူမ၏မရှိခြင်းမှာကို sniff မှသူမ၏ချစ်သူကိုဤ "မေတ္တာပန်းသီး" ပေးလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့ချစ်သူတွေမှကြှနျုပျတို့၏ကိုယျခန်ဓာအနံ့ mask မှအသီးအပွနှင့်ပန်းပွင့်၏ဒြပ်အနံ့ကိုအသုံးပြုပါ။ အတော်များများကအရသာကြှနျုပျတို့သညျ "သဘာဝက" သင်ယူမှုမှတဆင့်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရန် "ဒုတိယသဘောသဘာဝ" ဖြစ်လာနေကြတယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တစ်ချိန်က rewired ကျွန်တော်တို့ရဲ့ neuroplastic ဦးနှောက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်းအဖြစ်ဇီဝအဖြစ်တိုင်းနည်းနည်းအသစ်တစ်ခုသဘောသဘာဝဖွံ့ဖြိုးသောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့၏ "မူရင်းသဘာဝ" မှကျွန်ုပ်တို့၏ "ဒုတိယသဘာဝ" ကိုခွဲခြားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ညစ်ညမ်းတဲ့သက်သက်သာထူးခြားသောမွေးရာပါကိစ္စဖြစ်, ပထမတစ်ချက်မှာပုံရသည်နှင့်အဲဒါကိုအကြောင်းကိုဝယ်ယူဘာမှမရှိဘူးကြောင်းထင်ရလိမ့်မယ်, သူတို့ရဲ့အများဆုံးသဘာဝအခွအေနအေ, အဖော်အချွတ်လူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများ, ဆငျ့ကဲနှစ်ပေါင်းသန်းပေါင်းများစွာ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်သောထူးခြားသောမွေးရာပါတုံ့ပြန်မှု, ဖြစ်ပေါ်။ ထို့ပြင် "ဟုအဆိုပါ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု" ဟုခေါ်ကွဲပြားခြားနားသောမိတ်ဖက်အတွက်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေအထီးရဲ့အကျိုးစီးပွားသောကြောင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အမွေအနှစ်၏အစိတ်အပိုင်းပုံရသည်။ သို့သော်ရှိသမျှသောကရှိခဲ့ပါသည်ခဲ့ကြသည်လျှင်, ညစ်ညမ်းယောက်ျားအသစ်ကမိတ်ဖက်လိုဆိုတဲ့အချက်ကို မှလွဲ. မပြောင်းလဲသောပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးရန်မေတ္တာရပ်ခံကြောင်းအဆိုပါတူညီသောအစပျိုးခြင်း, ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်သူတို့၏အချိုးအစား, ကျွန်တော်တို့ကို excite လိမ့်မယ်။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှု, မညီကြောင်းကြောက်အပြင်းအထန်, သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်သဘာဝ, pent-up, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇအတိုင်းလှတျမွောကျကြောင်းနေကြသည်တောင်းဆိုဘို့ဤညစ်ညမ်းကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ရှိသည်မယ်လို့အရာဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ညစ်ညမ်းများ၏ content ဿုံတစ်ခုဝယ်ယူအရသာများ၏တိုးတက်မှုများကိုသရုပ်ဖော်တဲ့ပြောင်းလဲနေသောဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ "အမာခံ" ညစ်ညမ်းများသောအားဖြင့်အဓိပ်ပာသုံးဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းနှစ်ခုအကြားလိင်ဆက်ဆံမှု၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံဖော်တင်ဆက်သူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါကိုပြတဲ့မိတ်ဖက်နှိုးဆော်ခြင်း။ "Softcore" အများအားဖြင့်တစ်အိပ်ရာပေါ်မှာ, သူတို့ရဲ့ toilette မှာ, ဒါမှမဟုတ်တချို့ Semi-ရင်ခုန်စရာ setting ကိုအတွက်သုတ်သင်အမျိုးမျိုးပြည်နယ်များရှိ, အမျိုးသမီးများ၏ရုပ်ပုံများကိုဆိုလို, ရင်သားဖော်ပြခဲ့တယ်။
အခုတော့အမာခံပြောင်းလဲခဲ့ပြီးပိုမိုအမျိုးသမီးမျက်နှာများနှင့်ဒေါသထွက်နေတဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံအပေါ်သုက်အားလုံးပါဝင်သော script များမုန်းတီးမှုနှင့်အရှက်နှင့်အတူလိင် fusing, အတင်းအဓမ္မလိင်၏ sadomasochistic themes များကလွှမ်းမိုးနေသည်။ softcore ယခု cable ကို TV ပေါ်မှာရရှိနိုင်ယခုလူကြီးများအကြားအမာခံဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အကြာဘာ, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ဆက်ဆံနေစဉ် hardcore ညစ်ညမ်းယခုဖောက်ပြန်တဲ့လောကီသားတို့သည်အချည်းကပ်စူးစမ်း။ ခေတ်ဟောင်း၏နှိုင်းယှဉ်ယဉ် softcore ဓာတ်ပုံများကို - သုတ်သင်အမျိုးမျိုးပြည်နယ်များအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏ - ယခုဒီတော့အပေါ်ရုပ်မြင်သံကြားရော့ခ်ဗီဒီယိုများ, ဆပ်ပြာ Opera ကကြေငြာများနှင့်အပါအဝင်အရာအားလုံးရဲ့ pornification ၌တနေ့လုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာပေါ်တက်ပြပါ။
ညစ်ညမ်းရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းထူးခြားသောခဲ့; ဒါကြောင့်လူတွေအွန်လိုင်းသွားဘို့ပေးစတုတ္ထအဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ 2001 အတွက်ကြည့်ရှုတစ်ခု MSNBC.com စစ်တမ်းရာခိုင်နှုန်း 80 သူတို့အန္တရာယ်မှာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်များချပြီးခဲ့ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များတွင်ဤမျှလောက်အချိန်ဖြုန်းခဲ့ကြခံစားခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်လေ့လာတွေ့ရှိပြောင်းလဲမှုများကုထုံးအတွက်အနည်းငယ်လူများသွားလာမခံခဲ့ရပါ။ တစ်ဦးကလူမှုရေးပြောင်းကုန်ပြီ "porn" ၏စိတ်ကူးနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပုံကိုလှည့်ပတ်ခြင်း, 1990s အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အတိတ်ကာလကမကြာခဏပုဂ္ဂလိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ More အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ခက်ခဲခဲ့ပေမယ့်, ဒီညစ်ညမ်းအတန်ငယ်ပုဂ္ဂလိကကိစ္စ၏ဖြစ်ခြင်းကနေတစ်ခုတိုးအများပြည်သူတဦးတည်းထံသို့ ဝင်. တိကျစွာသောကွောငျ့ကာလအတွင်းညစ်ညမ်းနှင့်အတူအမှုမဟုတ်ပါ။
ဤပြောင်းလဲမှုပိုပေါ့ပေါ့ဝေါဟာရကို "porn" ဖို့ "ညစ်ညမ်းက" တောင်းဆိုထံမှပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်။ သူ့စာအုပ်အဘို့, ငါ Charlotte Simmons Am တွမ် Wolf တက္ကသိုလ်ကျောင်းခွဲများအပေါ်ကျောင်းသားများကိုစောင့်ကြည့်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးစွဲခဲ့သည်။ စာအုပ်တဦးတည်းယောက်ျားလေး, အိုင်ဗီပီတာမှာအထီးနေထိုင်ရာသို့ကြွလာနှင့်ကပြောပါတယ်, "မည်သူမဆိုညစ်ညမ်းတယ်?" ထိုယောက်ျားလေး၏တစ်ခုမှာတတိယအထပ်ကြိုးစားကြည့်ပါ "လို့ပြောပါတယ်။ ငါမဂ္ဂဇင်းများမှတစ်ဦးသည်းခံတက်တည်ဆောက်ပြီးသွားပြီ ... ငါ porn ချင် ... ဗီဒီယိုများလိုအပ်ပါတယ် "ဒါပေမယ့်ပီတာတုံ့ပြန်" သူတို့က။ ထအချို့ရှိတလက်မဂ္ဂဇင်းတယ်။ ကြီးသဘောတူညီချက်ကဘာလဲ? "
သူဟာမရှိတော့တစ်ချိန်ကသူ့ကိုဖွင်သောပုံရိပ်တွေပေါ်မွငျ့မားရနိုင်သူတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲကဲ့သို့ "ဒဏ်ခံ" ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ထိုအခါအန္တရာယ်ကငါကြိမ်အပ်သော, အရသာမှာအာနိသင်ပြဿနာများနှင့်အသစ်မှဦးဆောင်မြင်နေခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူကိုလူနာပြုသကဲ့သို့ဤအသည်းခံစိတ်ဆက်ဆံရေးသို့ကူးသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ညစ်ညမ်းသူတို့အသစ်ခက်ခဲ themes များမိတ်ဆက်အားဖြင့်စာအိတ်တွန်းအားပေးသည်ဟုဝါကြွားလိုက်တဲ့အခါသူတို့ဖောက်သည်အကြောင်းအရာတစ်ခုသည်းခံစိတ်တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့်အဘယ်သူတို့မပြောဘူး, သူတို့ကရပါမည်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ကျောယောက်ျားရဲ့risquéမဂ္ဂဇင်းများ၏စာမကျြနှာနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များ Viagra-type အမျိုးအစားမူးယစ်ဆေးကြော်ငြာများနှင့်ပြည့်စုံကြသည် - erectile ပြဿနာများအိုမင်းနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်လိင်တံအတွက်သွေးကြောပိတ်ဆို့နှင့်အတူအသက်ကြီးများအတွက်တီထွင်ဆေးဝါး။ ယနေ့တွင် porn ကိုရယူရန်သူကိုလူပျိုတို့က euphemistically လို့ခေါ်ပါတယ်အဖြစ်လွန်စွာခွန်အားမရှိခြင်း၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောသို့မဟုတ် "erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု" ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအထင်မြင်မှားစေသောအသုံးအနှုန်းဤလူတို့သည် penises အတွက်ပြဿနာတစ်ခုရှိသည်ဆိုလိုပေမယ့်ပြဿနာကသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်မြေပုံအတွက်မိမိတို့ခေါင်းပေါ်၌တည်ရှိ၏။ သူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုတဲ့အခါလိင်တံဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာခဲသူတို့စားသုံးကြသည်ညစ်ညမ်းနှင့်၎င်းတို့၏ခွန်အားမရှိခြင်းတို့အကြားဆက်ဆံရေးရှိစေခြင်းငှါသူတို့ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတဦးတည်း (အနည်းငယ်ယောက်ျား, သို့သော်ပုန်း။ "ငါ့ဦးနှောက်ကိုထုတ် masturbating" သုံးစွဲအချိန်အဖြစ်ကွန်ပျူတာ porn sites များမှာ၎င်းတို့၏နာရီဖော်ပြထား) ငါတို့သည်မြင်ရကြလတံ့အဖြစ်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပါသည်, ညစ်ညမ်း, မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများကအပ်ညျဝါ အဆိုပါ neuroplastic အပြောင်းအလဲအတွက်လိုအပ်ချက်နှင့်အတော်လေးစွဲလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်းနေတဲ့ဥပစာမဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးကတော့စှဲမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်သေစာမှဖြစ်ကြသည်။ ပြည်သူ့ပင်အပြေးရန်, လောင်းကစားဝိုင်းမှအလေးအနက်ထားစွဲစေနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးစွဲလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်သူတို့စွဲလမ်းလုပ်ရပ် consummate မနိုင်လျှင်သူတို့စိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့နှိုးဆွခြင်း, အတှေ့အကွုံဆုတ်ခွာမြင့်မားခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သည်းခံစိတ်ဖွံ့ဖြိုး, အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကြားမှထုတ်ရှာလှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့အရှုံးပြသပါ။
အားလုံးစွဲဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်, တခါတရံတွင်ရာသက်ပန်, neuroplastic ပြောင်းလဲမှုပါဝငျသညျ။ စွဲသည်, ဖြည့်ညှင်းနီးပါးအမြဲမဖြစ်နိုင်ဘူး, သူတို့စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုရှောင်ရှားရန်မှန်လျှင်သူတို့လုံးဝပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ အရက်သမားအမည်မသိ no "ဆိုတဲ့ဟောင်းတဦးအရက်သမား" ရှိပါတယ်အလေးအနက်ဆိုသည်နှင့်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုသောက်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်သူတွေကိုဟုပြော ဆို. တစ်ဦးအစည်းအဝေးတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးစေသည် "ငါ့နာမယောဟနျ, ငါတစ်ခုအရက်လည်းဖြစ်၏" ။ plasticity ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သူတို့ကမကြာခဏမှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်လမ်းကမူးယစ်ဆေးဝါးဘယ်လောက်စွဲလမ်းဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ, Maryland ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes မှာသုတေသီများ (NIH) ကမူးယစ်ဆေးတစ်ခုရိုက်ချက်ရရှိသွားတဲ့သည်အထိဘားကိုနှိပ်ဖို့ကြွက်လေ့ကျင့်။ တိရစ္ဆာန်အဆိုပါခက်ခဲမူးယစ်ဆေးပိုစွဲလမ်း, ဘားကိုနှိပ်မှလုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ကိုကင်း, အားလုံးနီးပါးသည်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဦးနှောက်ထဲမှာပျော်မွေ့-ပေးခြင်း neurotransmitter dopamine ပိုပြီးတက်ကြွအောင်ပြေးအဖြစ်ပင် nondrug စှဲ။ တစ်ဦးအပြေးပြိုင်ပွဲကို run ခြင်းနှင့်အနိုင်ရ - - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်က၎င်း၏လွှတ်ပေးရေးကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကျွန်တော်တစ်ခုခုပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ Dopamine, အကျိုးကို transmitter ကိုလို့ခေါ်ပါတယ်။ မောသော်လည်း, ငါတို့စွမ်းအင်, စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အပျြောအပါးများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုတစ်ခုမြင့်တက်ရနှင့်ပင်ငါတို့လက်မြှင့်နှင့်တစ်ဦးအောင်ပွဲရင်ခွင်ကို run ။ အဆိုပါ finish ကိုလိုင်းမှာအဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သော dopamine မြင့်တက်, ပြိုကျရနှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းကိုရွားလှခံစားရသူကအခြားလက်ပေါ်အရှုံးသမား, ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dopamine system ကိုအပိုင်စီးခြင်းအားဖြင့်, စွဲလမ်းတ္ထုများကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုသို့အလုပ်လုပ်ရန်မလိုဘဲကျွန်တော်တို့ကိုပျော်မွေ့ပေးပါ။
Dopamine လည်းပလပ်စတစ်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအရမ်းပျော်ကြောင်း dopamine ၏တူညီသောမြင့်တက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်သောအပြုအမူများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အာရုံခံဆက်သွယ်မှုကျစ်လစ်။ အသံကစားနေစဉ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်မိုက်ကယ် Merzenich တိရစ္ဆာန်ရဲ့ dopamine ဆုလာဘ် system ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, dopamine လွှတ်ပေးရန်တိရစ္ဆာန်ရဲ့အာရုံကိုမြေပုံထဲမှာအသံများအတွက်ကိုယ်စားပြုမှုတိုးချဲ့, ပလပ်စတစ်ပြောင်းလဲမှုနှိုးဆွ။ porn နှင့်အတူအရေးပါသော link ကို, နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက်လိင် drive ကိုတိုးမြှင့်အော်ဂဇင်ဆောင်ရွက်မှုတွေ, နှင့်ဦးနှောက်ရဲ့အပျြောအပါးစင်တာများကိုသက်ဝင်, dopamine လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဖြန့်ချိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်းပါဝါ။ အကျိုးကိုစင်တာ - - မူးယစ်ဆေးစွဲများတွင်ပြောင်းလဲကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က neuropsychiatrist ဒေါက်တာ Valerie Voon မကြာသေးမီက porn အဖြစ်စွဲသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖော်ပြရန်တဲ့သူယောက်ျား (သူဖြစ်သောကြောင့်ထိုသို့ဆက်ဆံရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရ) ကိုအတူတူဦးနှောက်ဧရိယာ၌အပြောင်းအလဲများဖွံ့ဖြိုးကြောင်းပြသခဲ့သည်။
တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်မှအဲရစ်နတ်စတာကစွဲလမ်းမှုသည်တိရိစ္ဆာန်များ၏ ဦး နှောက်ကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ များစွာသောစွဲလမ်းစေသောဆေးများသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အာရုံခံဆဲလ်များ၌စုပြုံနေသော Delta-FosB ဟုခေါ်သောပရိုတိန်းတစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအသုံးပြုသည့်အချိန်တိုင်းတွင်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုကိုမထိမချင်း Delta-FosB သည်ပိုမိုစုဆောင်းသည်။ ၎င်းခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုရပ်တန့်သွားပြီးနောက်ကြာရှည်စွာပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဦး နှောက်၏ dopamine စနစ်ကိုပျက်စီးစေပြီးတိရစ္ဆာန်ကိုစွဲလမ်းစေနိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ FosB နှင့် dopamine စနစ်၏တူညီသောအမြဲတမ်းအပြောင်းအလဲများကိုစုစည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းဆရာများသည်လိင်ပျော်ရွှင်မှုမှကျန်းမာသောကျေနပ်မှုနှင့်သက်သာမှုကိုပေးမည်ဟုကတိပေးသည်၊ သို့သော်သူတို့မကြာခဏဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အရာသည်စွဲလမ်းမှု၊ ဝိရောဓိအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်သောအထီးလူနာများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏတောင့်တခဲ့သော်လည်းမနှစ်သက်ခဲ့ပါ။ ပုံမှန်အမြင်ကတော့စွဲလမ်းသူသည်သူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်မွေ့ပြီးရုပ်သိမ်းခြင်း၏နာကျင်မှုကိုမကြိုက်သောကြောင့်သူ၏ပြင်ဆင်မှုကိုပိုမိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အပျော်အပါးမရှိသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည်မြင့်မားစေရန်ဆေးပမာဏမလုံလောက်ကြောင်းသိသောအခါနှင့်၎င်းတို့သည်ဆေးကုသမှုမခံယူမီ ပို၍ စိတ်အားထက်သန်ကြလိမ့်မည်။ လိုချင်ခြင်းနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းသည်ကွဲပြားသောအရာနှစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ဦးစှဲလမျးသူအတွေ့အကြုံများမတရားသောသည်သူ၏ပလတ်စတစ်ဦးနှောက်မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံမှထိခိုက်ဖြစ်လာသည်။ အကြောင်းမူကား, အသိမြှသည်းခံစိတ်ထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ သည်းခံစိတ်ဖွံ့ဖြိုးသကဲ့သို့, စှဲလမျးသူသာယာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရရန်ပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ် porn ၏ပိုပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်; ာင်းဖွံ့ဖြိုးသကဲ့သို့, သူလျော့နည်းခြင်းနှင့်အပြင်းအထန်ကတပ်မက်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာများလျော့နည်းရန်လိုအပ်သည်။ ဒီတော့ာင်းသေချာပေါက် like နှိပ်မရသော်လည်း, ချို့တဲ့တိုးလာစေပါတယ်။ ဒါဟာာင်းမှဦးဆောင်ကြောင်း, တစ်ဦးစွဲလမ်းပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုမှထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပွား, မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ-FosB များစုစည်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအပျြောအပါးစနစ်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံဒါမှမဟုတ်မုန့်ညက်ရှိခြင်း, တစ်ငြိမ်သက်, အပျြောအပါးပြည့်စုံတက်ရောက်ကြောင်းသူတွေရဲ့စားသောက်ပျော်မွေ့။ ၎င်း၏ neurochemistry opiates နှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်ငြိမ်းချမ်းသော, ပျော်ရွှင်ဖွယ်ချမ်းသာပေးသည့်နဲ့အတူ Endorphins များလွှတ်ပေးရန်, အပေါ်အခြေခံသည်။ porn လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုတစ်ခုအဆုံးမဲ့မိန်းမဆောင်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်အစာစားချင်စိတ် system ကို hyperactivates ။
ညစ်ညမ်းမှာရှာဖွေနေငါနှင့်အခြားသူများ 1990s အတွက်ကုသနေသော၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများ, မှာယောက်ျား dopamine သို့မဟုတ်ယင်း၏ညီမျှ၏တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ရရန်ဘားကိုနှိပ်ခြင်း, NIH ရဲ့လှောင်အိမ်ထဲမှာကြွက်နှင့်တူ uncannily ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကမသိခဲ့ပါသော်လည်း, သူတို့သည်ဦးနှောက်မြေပုံ၏ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲအတွက်လိုအပ်သောအပေါငျးတို့သအခြေအနေများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ကြောင်းညစ်ညမ်းလေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများသို့လှည့ခဲ့သညျ။ အတူတကွဝါယာကြိုးအတူတကွပစ်ခတ်ကြောင်းအာရုံခံကတည်းကဒီလူပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲအတွက်လိုအပ်သော rapt အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူဦးနှောက်၏အပျြောအပါးစင်တာများသို့, ဤပုံရိပ်တွေ wiring အလေ့အကျင့်၏ကြီးမားသောပမာဏတယ်။ သူတို့ကသူတို့ကိုအားဖြည့်သောအခါကွယ်ပျောက်၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများကနေ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့မိန်းကလေးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်ကဤရုပ်ပုံများကိုစိတ်ကူး။ သူတို့က,a"က dopamine ၏ spritz" အကျိုးကို neurotransmitter လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခံစားရပြီးသူတို့ masturbated သည့်အခါတစ်ဦးအော်ဂဇင်ခဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, ထိုအစည်းအဝေးများအတွင်းဦးနှောက်ထဲမှာရာ၌ဆက်သွယ်မှုစုစည်း။ အကျိုးကိုအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့ခဲ့ပါဘူးမသာ; ဒါကြောင့်သူတို့ကဝယ်ယူခံစားခဲ့ရတယ်ဟာအရှက်အဘယ်သူအားမျှတော်ကိုနှိုးဆော် Playboy စတိုးဆိုင်မှာ။ ဒီနေရာတွင်အဘယ်သူမျှမ "ပြစ်ဒဏ်" နှင့်အတူသာအပြုအမူဆုလာဘ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပလတ်စတစ်သည်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောပုံရိပ်အသစ်များအတွက် ဦး နှောက်မြေပုံများသည်ယခင်ကသူတို့ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည့်အရာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တိုး။ တိုးလာသည်။
ပထမဦးဆုံးကအင်္ဂလန်ရဲ့ထုတ်ဝေ Sean သောမတ်စ်၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ပရိသတ်, တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲသို့ဆငျးသတဲ့ယောက်ျား၏ထူးခြားတဲ့အကောင့်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းဦးနှောက်မြေပုံများအားပြောင်းလဲနှင့်လိင်အရသာပွောငျးလဲအဖြစ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရေးပါ-ကာလ plasticity ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဘယ်လိုအလင်းတှရေဲ့အဓိပ်ပာ။ သောမတ်စ်ငါတကယ်, ညစ်ညမ်းမဟုတ်ကြိုက်နှစ်သက်ဖို့အသုံးပြုဘယ်တော့မှ "ဟုရေးသားခဲ့သည်။ မှန်ပါသည်, ခုနစ်ဆယ်၌ငါ့ဆယ်ကျော်သက်တှငျငါ၏ထူးဆန်းမိတ္တူရှိသည်ဖို့ကိုအသုံးပြု Playboy ငါ့အခေါင်းအုံးအောက်မှာ။ သို့သော်တပြင်လုံးကိုအပေါ်ငါတကယ်အသားအရေ mags သို့မဟုတ်အပြာရုပ်ရှင်တွေဘို့မသွားခဲ့ပါဘူး။
သူတို့ကိုငါ, ငွီးငှေ့ဖှယျထပ်တလဲလဲ, စိတ်ပျက်ဖွယ်, နှင့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအလွန်ရှက်စရာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "သူ porn မြင်ကွင်းတစ်ခု၏ဖှယျကြောင့်စည်ပင်သူ moustachioed လုံး၏ garishness ဖွငျ့ဆုပျရှံခဲ့သည်။ သို့သော် 2001 အတွက်သူပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းသို့ သွား. မကြာမီပြီးနောက်သူလူတိုင်းအင်တာနက်ကိုကျော်ယူပြီးခံခဲ့ရသည်ဟု porn အကြောင်းကိုစပ်စုတယ်။ အဆိုပါခက်ခဲပစ္စည်းပစ္စယသို့လူတွေကိုရဖို့, ကြော်ငြာဗီဒီယိုတွင်တစ်ကြိမ်, သို့မဟုတ် "တံခါးပေါက်က်ဘ်ဆိုက်များ" - အဆိုပါဆိုဒ်များအတော်များများလွတ်ကြ၏။ အဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများပြခန်းသူရှိခဲ့မသိတောင်မှတဦးတည်း, ထို surfer ၏ဦးနှောက်အတွက်ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်ဖို့ဒီဇိုင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှု၏ဘုံအမျိုးအစားများ, ရှိခဲ့သည်။ သောမတ်စ်သူတို့ "ကိုပိုမိုနက်ဖြန်နေ့၌အဘို့အကြှနျုပျကိုပြန်ဆွဲငင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်။ နောက်။ "
တစ်နေ့တွင်ပုံများရိုက်ကူးသည့် site တစ်ခုကိုသူတွေ့ခဲ့သည်။ သူအံ့သြသွားတာကသူအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်။ မကြာမီသောမတ်စ်သည်“ Bernie's Spanking Pages” နှင့်“ Spanking College” တို့ကဲ့သို့သောသက်ဆိုင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမကြာမီတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူကဤသို့ရေးသားခဲ့သည် -“ ယခုအချိန်သည်တကယ့်စွဲလမ်းမှုပင်ဖြစ်သည်ဟုသူကရေးသားခဲ့သည်။ ရိုက်တာကိုကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အခြားမည်သည့်အပေါက်များကိုသိုမှီးထားသနည်း။ ကျွန်ုပ်၏လိင်မှုကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏နေအိမ်လုံခြုံရေးကိုယခုစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုအခြားလျှို့ဝှက်ပြီးအကျိုးရှိသည့်အခြားထောင့်ကွက်များကဖုံးကွယ်ထားသည်။ ကထွက်လှည့်အဖြစ်အများအပြား။ လိင်တူချင်းချစ်သူ၊ လိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာအမာခံများနှင့်ဂျပန်မိန်းကလေးများ၏ပူပြင်းတဲ့ဘောင်းဘီကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအတွက်ပြင်းထန်သောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါသည်လည်း knickers မရှိသော netball ကစားသမားများ၊ ရုရှားမိန်းကလေးများကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်ရေချိုးခန်းထဲရှိသူတို့၏လွှမ်းမိုးသောအမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကလက်အောက်ခံဒိန်းမတ်မင်းသမီးများ၏ရင့်ကျက်မှုရှိသည့်အခြေအနေမျိုးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ပိုက်ကွန်မှာငါ့မှာလိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်အပြုအမူအမျိုးမျိုးရှိကြောင်း၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာဒီဆန္ဒများကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာပြသခဲ့သည်။ ”
သူယူဆရအပြစ်ပေးခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံကိုသို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်သို့ပုတ်သောရိုက်တာဓါတ်ပုံတွေပေါ်မှာဖြစ်ပျက်သည်အထိသူမြင်ပုံရိပ်တွေကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားပေမယ့်သူ့ကိုအတင်းအကျပ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ အခြားလူများရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘွားမြင်လေ၏။ သောမတ်စ်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကိုငါ့လူနာကြောင်းအလားတူဖြစ်ခဲ့သည်: သူတို့တကယ်ကသူတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားအချို့သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံဆောင်ပုဒ်ထိမိသောပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုအပေါ်သို့ hit သည်အထိသူတို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်အရာကိုအပြည့်အဝသတိပြုဖြစ်ခြင်းမရှိပဲ, သူတို့ကပုံရိပ်တွေနဲ့အခြေအနေတွေရာပေါင်းများစွာ scan ဖတ်။
သောမတ်စ်ကြောင်း image ကိုတွေ့ရှိရသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူကပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဒါကရိုက်တာပုံရိပ်, ပလပ်စတစ်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်အခွအေနေကသူ့အာရုံစိုက်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါကိုမှန်ကန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်မတူဘဲဤညစ်ညမ်းပုံများ, ကွန်ပျူတာပေါ်မှာနေ့တိုင်းတနေ့လုံးရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။
သူကသူ့ကိုယ်သူထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မှသာသုံးနာရီတညဉ့်အိပ်ပျော်နေသော, surfing လျှို့ဝှက်စွာအနည်းဆုံးငါးနာရီတစ်ရက်ဖြုန်းခဲ့သည်။ သူကအခြားသူတစ်ဦးဦးကိုမြင်လျှင်ခဲ့သည်ဆိုပါကမိမိအပင်ပန်းနွမ်းနယ်သတိထားသူ့ရည်းစား, အံ့ဩကြ၏။ သူကဒါကြောင့်သူ့ကျန်းမာရေးခံစားခဲ့ရကြောင်းဆုံးရှုံးလျှင်, သူတစ်ဦးဆေးရုံအရေးပေါ်ခန်းထဲမှာသူ့ကိုဆိုက်ရောက်ကြောင်းကူးစက်မှု၏စီးရီးလေနောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုစတော့ရှယ်ယာယူစေ၏အိပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူကသူ့ယောက်ျားကိုအမိတ်ဆွေများကိုအကြားမေးမြန်းစတင်ခဲ့ပြီးသူတို့ထဲကအတော်များများလည်းစှဲကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ရှင်းနေသည်မှာသောမတ်စ်ရဲ့လိင်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်, မိမိအသိအမြင်အပြင်ဘက်ရှိ၏။ ပိုက်ကွန်ရိုးရှင်းစွာ quirks နှင့် kinks ထုတ်ဖေါ်ပါသလား, သို့မဟုတ်ပါကလည်းသူတို့ကိုဖန်တီးကူညီပေးသနညျး ငါကအသစ်သောကွန်ရက်များဖွဲ့စည်းရန်အတူတကွသည်ဤဒြပ်စင်ဆောင်ခဲ့သည် surfer ရဲ့သတိအသိအမြင်ပြင်ပတွင်ဖြစ်ရပြီကြောင်းလိင်၏ရှုထောင့်မှထွက်အသစ်ကစိတ်ကူးယဉ်ဖန်တီးထင်ပါတယ်။ ဒါဟာလူအတော်များများမှာမြင်တွေ့ကြပြီဖွယ်ရှိသည်မဟုတ်, သို့မဟုတ်ပင်စိတ်ကူး, ရငျးနှီးရေချိုးခန်းမှာသူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးအမျိုးသမီးမိတ်ဖက်များကရိတ်လကျအောကျခံဒိန်းမတ်မင်းသမီး။ Freud ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကူးယဉ်နေသောကြောင့်သူတို့ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအစိတ်အပိုင်းများ၏စိတျကိုကိုင်ယူကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့သောလိင်ကွဲယောက်ျားအဟောင်းတွေ, လွှမ်းမိုးအမျိုးသမီးတွေလိင်တူချစ်သူလိင်သို့အငယ်အမြိုးသမီးမြားအစပျိုးဘယ်မှာ porn ကးစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။ အစောပိုင်းကလေးဘဝအတွက်ယောက်ျားလေးများမကြာခဏ, သူတို့ရဲ့က "သူဌေးက" နေသောမိခင်များ, နှင့်စားဆင်ယင်ခြင်းဖြင့်လွှမ်းမိုးသုတ်သင်သူတို့ကိုကိုလျှော်ခံစားရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်နိုင်သည်။ အစောပိုင်းကလေးဘဝမှာတော့သူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်၎င်းတို့၏မိခင်များနှင့်အတူဖော်ထုတ်ခံစားရသည့်အခါအချို့ယောက်ျားလေးများ "မိန်းကလေးတစ်ဦးကဲ့သို့" တဲ့ကာလဖြတ်သန်းစေခြင်းငှါ, လိင်တူချစ်သူလိင်၎င်းတို့၏အကြာတွင်အကျိုးစီးပွားကသူတို့ကျန်နေတဲ့သတိလစ်အမျိုးသမီးမှတ်ပုံတင်ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ hardcore porn လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးကြီးသောကာလဖွဲ့စည်းကြောင်းအစောပိုင်းအာရုံကြောကွန်ရက်များအချို့ unmasks အပေါင်းတို့သည်အင်္ဂါရပ်တွေကိုအတူတကွကြိုးထားတဲ့အတွက်အသစ်တခုကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းရန်အတူတကွသမျှသောဤမေ့လျော့စောစော, ဒါမှမဟုတ်ဖိနှိပ် element တွေကိုတတ်၏။ porn ဆိုဒ်များဘုံ kinks ၏ကတ်တလောက် generate နှင့်ပုံရိပ်တွေအတွက်အတူတကွသူတို့ကိုရောမွှေပါ။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင် surfer တစ်ကြိမ်မှာမိမိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်တစ်ခုအရေအတွက်ကတိုက်တွန်းတဲ့လူသတ်သမားပေါင်းစပ်တွေ့။ ထိုအခါသူသည်အကြိမ်ကြိမ်ပုံရိပ်တွေကြည့်ရှု masturbating, dopamine လွှတ်နှင့်ဤကွန်ရက်များခိုင်မာအားကောင်းစေခြင်းဖြင့်ကွန်ယက်အား။ သူက "neosexuality" ၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, မိမိသင်ျဂွိုဟျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေအတွက်ခိုင်မာတဲ့အမြစ်များရှိပြီးတစ်ဦးပြန်လည်တည်ဆောက်လိင်စိတ်ဖန်တီးထားသည်။ သူမကြာခဏသည်းခံစိတ်ဖွံ့ဖြိုးသောကြောင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဥတု၏အပျြောအပါးတစ်ဦးရန်လိုလွှတ်ရာအပျော်အပါးတွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းရပါမည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရန်လိုပုံရိပ်တွေ ပို. ပို. ရောနှောလျက်ရှိသည် - အမာခံ porn အတွက် sadomasochistic themes များအတွက်ဤအရပ်မှစီးပွါး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပျြောအပါးစနစ်များ၏ rewiring နှင့်ငါတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာဝယ်ယူရနိုင်စေရန်အတိုင်းအတာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးသို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုလှည့်အရာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ masochism ကဲ့သို့သောကောက်သောအများစုသိသိသာသာမြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဦးနှောက်သာယာသောရာမူလကပင်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ပြီး, ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာကျင်မှု system ကိုဖြစ်ပေါ်သော Impulses သတင်းပို့ပလပ်စတစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်မွေ့သည့်စနစ်သို့ rewired ဖြစ်ကြောင်းလုပ်ရပေမည်။
ကောက်သောနဲ့အတူပြည်သူ့မကြာခဏကျူးကျော်ခြင်းနှင့်လိင်ရောထွေးသည်ဟုလှုပ်ရှားမှုများန်းကျင်သူတို့ဘဝစုစည်းပြီး, သူတို့သည်မကြာခဏဆင်နွဲခြင်းနှင့်အရှက် idealise, ရန်လိုမုန်းတီးမှု, ဖီဆန်ခြင်း, တားမြစ်ထားသည်, furtive အဆိုပါ lusciously အပွစျရှိနှင့်မညီကြောင်းများ၏ကြေကွဲ; သူတို့မျှသာ "ပုံမှန်" ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်များအတွက်အထူးခံစားကြရသည်။ ဤ "လွန်ကျူးခြင်း" သို့မဟုတ်ခိုင်မာသောစိတ်သဘောသဘောထားတွေဖောက်ပြန်တဲ့၏ခံစားဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ကသီးခြားစီအပျော်အပါးကိုပေးနိုင်ပါသည်တစ်ဦးချင်းစီအရာနှစ်ခုအကျွမ်းတဝင်သဘောထားတွေ, လိင်နှင့်ရန်လို, fuses, သူတို့ဆေးရုံကဆင်းကြသောအခါဒါအတူတူသူတို့ကိုဖြစ်စေသောအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ sadism plasticity သရုပ်ဖော်, အပျြောအပါးနှစ်ဆဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် masochism - မကြာခဏအလေးအနက်ထားစိတ်ဒဏ်ရာခဲ့ကြသူတွေကိုတွင်တွေ့မြင် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပျော်အပါးနှင့်နာကျင်မှုများ plasticity သရုပ်ပြပိုကှကျကှကျကှငျးကှငျးကတစ်ခုခုမူလကပင်မနှစ်မြို့ဖွယ်, နာကျင်မှုကြာနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းသို့လှည့်နေသောကြောင့်ပိုပြီးအခြေခံကျကျလိင် drive ကိုပြောင်းလဲတာနောက်ထပ်ကိုသွားပြီး စနစ်များကို။
ဒါက All-ရည်ရွယ်ချက်ကနေဒါပါရမီ, မာရှယ် McLuhan, မကြာခဏအလတ်စားသတင်းစကားကြောင်း quipped ။ သူပြုသကဲ့သို့မီဒီယာဂုရုနေရာတိုင်းများမှာဘယ်မှာအနေနဲ့အသက်အရွယ်မှာတော့အနည်းငယ်ကယ့်ကိုအခြားလမ်းတဝိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွမ်းကျင်နှင့်မ, မီဒီယာကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ကြောင်း, နားမလည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မီဒီယာဂုရုကတာဝန်ခံ၌နေသောငါတို့သည်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
ငါတောင်မှသူတို့လျှင်, 1990s အတွက်လူနာသူတို့ကွန်ပျူတာများကအတည်ပြုအဖြစ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း (နှင့်အရှင်သောမတ်စ်ပြုသကဲ့သို့အစောပိုင်း girly မဂ္ဂဇင်းများမှ, ၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှိုင်းယှဉ်နိုင်) မကြာခဏဖွင့်သုံးစွဲဖို့ပထမဦးဆုံးအကြားရှိနသောသူကဆိုသည်ပါပြီ ပယ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်လတ်တွဲခဲ့သည်။
သူမ၏စာအုပ်၌, Bunny ပုံပြင်များ: အ Playboy Mansion မှာတံခါးပိတ်, Hugh Hefner ဟောင်း "အရာရှိတဦးကမိန်းကလေး" ၏တဦးတည်းသူ Izabella စိန့်ဂျိမ်း, Hef နှင့်အတူလိင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ Hef, သူ့နှောင်းပိုင်းတွင် 70s အတွက်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ကြိမ်မှာသူ့ရည်းစားလေးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတို့တွင်စိန့်ဂျိမ်းစ်နှင့်အတူ, နှစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်လိင်ဆက်ဆံလိမ့်မယ်။ သူကအသစ်အဆန်း, အမျိုးမျိုး, အကွိမျမြားစှာနဲ့သူအလိုရှိဘာလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိအမျိုးသမီးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ပျြောရှငျ orgy ၏အဆုံးမှာစိန့်ဂျိမ်း wrote "ဟုအဆိုပါခမ်းနားဇာတျသိမျး: porn ကြည့်နေစဉ်သူ masturbated" သို့ရောက်ကြ၏။
ဒီနေရာမှာတကယ်မယ့်အစား, တက porn ကြယ်များနှင့်တကွ, အဆုံးစွန် porn စိတ်ကူးယဉ်ထွက်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်သောသူသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပုံရိပ်မှ၎င်းတို့၏စစ်မှန်သောအသားနှင့်ထိတွေ့လွှဲ။ အချို့ကဆိုသည်ကား "လူဟောင်းတစ်ဦးချိုး Give" မယ်, သူဖြစ်ကောင်းသူအော်ဂဇင်ဟာနည်းနည်းအကူအညီလိုအပျ, သူ့နှောင်းပိုင်းတွင်မတွေ့ရသေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကန့်ကွက်သောအရာကိုသူ့ကိုကူညီပေးခဲ့တခါဖယ်ရှားလှပသော porn ကြယ်များ, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲက celluloid ပုံများ, မဟုတျကွောငျးသောအချက်, လွဲချော်။ ဒါဟာကျနော်အကြံပြု, တကယျ့ပုဂ်ဂိုလျများအတွက်လိင်ကိစ္စအရသာတစ် remove အားမှာလူတစ်ဦးကိုကိုယ်စားပြုသောအလယ်အလတ်အားဖြင့်လှညျ့ စား. နိုငျပါလာသည်ကိုဘယ်လိုတစ်အစွမ်းထက်သာဓကဖြစ်ခဲ့သည်။
porn တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာခဲ့သည်သူလူနာတွေအတွက်အမျှအများဆုံးသူတို့ပြဿနာကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့ပလပ်စတစ်ကအားဖြည့်ခဲ့ကြတခါအအေးကြက်ဆင်ကိုသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့အိမ်ထောင်ဖက်မှတစ်ဖန်ပြန်လည်ဆွဲဆောင်ခဲ့နောက်ဆုံးမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤလူတို့၏အဘယ်သူမျှမစွဲလမ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသို့မဟုတ်အလေးအနက်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာခဲ့ကြပြီးသူတို့ကိုဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါမိမိတို့ပြဿနာအာရုံခံကွန်ရက်များအားနည်းစေမယ့်ကာလအဘို့မိမိတို့ကွန်ပျူတာများ အသုံးပြု. ရပ်တန့်နှင့်ညစ်ညမ်းဘို့မိမိတို့အစာစားချင်စိတ်အခြေခံကျကျလျော့နည်းသွားသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကဖြစ်ကောင်းတဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်အားဖြင့် facilitated ပျော့စွဲပေါင်းစပ်, တွေ့ကြုံခဲ့ကြ: ဒါခေါ် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုဘယ်မှာအထီးနို့တိုက်သတ္တဝါများ, ပြီးသားလိင်ကျေနပ်မှုအသစ်တစ်ခုလက်ခံမိတ်ဖက်များကပြန်လည်စိတ်လှုပ်ရှားလျင်မြန်စွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုရှိသည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့မျိုးပွားမှုအခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အားဖြင့်, အထီးသို့ built နိုင်ပါသည်။ porn ဘို့မိမိတို့ကွန်ပျူတာအသုံးမပြုအသုံးပြုပုံတစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအတွက်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသွေးဆောင်မှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်အခြား neuroplastic ဥပဒစေ့စပ်: တစ်ဦးမလိုချင်တဲ့အလေ့အထကိုချိုးဖျက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်သည့်ဆိတ်ကွယ်ရာဝါယာကြိုးမပါဘဲမီးကြောင့်အာရုံခံ။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအတွက် Over-ပါဝင်ပတ်သက်သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဖက်, ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဖက်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ခုစွဲလမ်းစိတ်သဘောထားရှိပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအထောကျအကူဖြစ်ရပြီအကြောင်း, နောက်ထပ်သံသရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို၏အသိပညာ, ဒါပေမယ့်အမျိုးမျိုးသောကြားဝင်မယ့်လိုအပ်လိမ့်မယ် အခြားအစှဲပါ။
ပြန်ထိန်းချုပ်မှု, သူတို့ရဲ့အရေးပါကာလ၌, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးအစားများများအတွက်ဦးစားပေးဝယ်ယူတဲ့သူလူနာတွေအတွက်ရှုပ်ထွေး, ပြီးတော့သည်ဤအကျိုးစီးပွားအတွက်ညစ်ညမ်းအတွက်အစပျိုးခြင်းအားဖြင့်, re-ဖြစ်ပေါ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကုထုံးအတွက်, သူတို့ကသူတို့အပျေါမှာထိုကဲ့သို့သောချုပ်ကိုင်ခဲ့ဘာကြောင့်သင်ယူဖို့, သစ်ကိုအစပျိုးခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ခဲ့ကြတယ်အခါ, ထိုကဲ့သို့သောယောက်ျား (။ တစ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာများ၏တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှခလုတ်အဖြစ် "ရိုက်တာ" ၏စဉ်းစားပါ), နှင့်ချုပ်ကိုင်လျှော့ပေးရေး ။ လူတွေမဖြေရှင်းနိုင်စိတ်ဒဏ်ရာအခါ (ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဥတုဒါသာယာသောဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကစိတ်ဒဏ်ရာနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ကူးယဉ်မကြာခဏ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့အားပိုပြီး" သာယာသော "လုပ်မယ့်နည်းလမ်းရှာ, သူတို့ကသူတို့ဖြစ်ပေါ်သည့်နာကျင်စိတ်ခံစားမှုကျွမ်းကျင်ဖို့အကြောင်း, အဆန်းမဟုတ်ပါ "။ သူတို့ကတစ်ဦးဖြစ်လာသည်" turn-on "။ ) သို့သျောပင်အချို့သောဒီလူကိုပြဿနာအရသာဆည်းပူးဖို့ခွင့်ပြုကြောင်း neuroplasticity ၏တူညီသောဥပဒေများလည်းကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, ကုထုံး၏သင်တန်းအတွက်, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ type ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်အတွက် အသစ်များ, ကျန်းမာသန်စွမ်းသူမြားကိုဆည်းပူးရန်နှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဟောင်းတွေ, ဒုက္ခသူတွေကိုဆုံးရှုံးဖို့အထူးကြပ်မတ်ကုသမှု။ ကျနော်တို့သာစှဲကနေပြန်လည်နာလန်ထူရာအရပ်ကိုယူပုံကို, သိပ္ပံကနေသင်ယူဖို့စတင်နေကြသည်။ အခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ် abstinence ကာလပြန်လာဖို့ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စင်တာဘို့လိုအပ်ပါသည် ဦးတည် ပုံမှန်အခါစွဲလမ်းမောင်း၏ရှေ့တော်၌ ,. ဒါပေမယ့်တချို့ကျန်နေတဲ့ sensitivity ကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့မြစ်ဝကျွန်းပေါ်-FosB အခွအေနေ၌ရှိသကဲ့သို့, ဖြစ်နေဆဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားကတည်းကသူ့ဟာသူကျနော်တို့ porn စွဲပြန်လည်ထူထောင်၏လေ့လာမှုများရှိသည်သည်အထိကျနော်တို့သေချာဘို့အသိရကြမည်မဟုတ်, ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။
လိင်နီးပါးအမြဲသာ sadomasochism သို့ချည်ထားထားပြီးဘယ်သူကိုများအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်သူတစ်ဦးပြဿနာရှိခြင်းကဲ့သို့မိမိကိုမိမိမမြင်နိုင်ပါဘူးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာဒါဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအခွအေနေဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးညစ်ညမ်းသုံးပြီးတဲ့အခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာလေးလည်း, ဒါပေမယ့်ရှိပြီးသားတဦးတည်းအားဖြည့်ပေးမထားပါ။ ဒါဟာမသာစိတ်ကိုအတွက်စွဲလမ်းအပြုအမူကိုစောင့်ရှောက်ရန်အရေးကြီးပါသည်, ဒါပေမယ့်သူကကမ်းလှမ်းတဲ့သူ။ တချို့ကယောက်ျားသူတို့ဆွဲဆောင်မှုကျန်းမာမိတ်ဖက်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်အနည်းငယ်အလားအလာရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူတို့အလုပ်, လူမှုရေးအခြေအနေ, သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးကိစ္စများနှင့်အတူရုန်းကန်အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကြည့်ရှု, "ရုပ်ဆိုး" သူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ "ဟုအဆိုပါကြီးစိုးအဆင့်ဆင့်အတွက်အနိမ့်" ဖြစ်ယုံကြည်ပါတယ်, ဤတခြားသူတွေကိုအိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်သူတို့ကိုလျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုပြန်ဆိုသော။ သူတို့ကစိတ်ပျက်အားငယ်ထဲမှာပိုးပန်းကနေဆုတ်ခွာစေနိုင်သည်။ ထိုသူတို့အဘို့, porn ၏ဘဝအသက်တာကိုအလွယ်တကူမယ့်ဆက်ဆံရေးအတွက်လိင်များအတွက်အစားထိုးဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာ "သူတို့လုပျနိုငျကိုအကောင်းဆုံး" သူတို့ကိုခံစားရ၏။ သူတို့ကိုကူညီပေးခြင်းသူတို့ကို "အရှုံးသမား" ကဲ့သို့ခံစားရပါစေသောပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတတ်ရန်သင်ယူကူညီပေးနေလိုအပ်သည်။
သူတို့ကကိုယ်ဝန်ဆောင်အဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ၏, ငယ်ရွယ်ဆယ်ကျော်သက်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးမကြာခဏနှစ်လိုဖွယ်အိမ်ထောင်ဖက်၏, သူတို့ကအဆင့်ဆင့်အတွက်အနိမ့်ဖြစ်ကြောင်းခံစားရတယ်။ သို့သော်လည်းအဘယ် Clinician အကြောင်းအများကြီးသိသေး, ငါတို့သည်အဘယ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ porn ထိတွေ့မှု၏ဤအဆင့်ကိုအတော်လေးအသစ်ဖြစ်၏ကွောငျ့, porn ကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်ဆယ်ကျော်သက်, ကူညီကြမည်ကိုမည်သို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဘူး ဤအလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အရသာအပေါ်ယံဖြစ်ထွက်လှည့်တော်မူမည်လော အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်နှစ်ပေါင်းနေဆဲပုံစံကာလဖြစ်သောကြောင့်သို့မဟုတ်အသစ်က porn ကးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့တွေကို embed ကြမည်နည်း
အတွင်းယောက်ျားလေးနဲ့တူလူသားတွေ, InRealLifeကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institutes မှာနမူနာလိုပဲလှောင်အိမ်ထဲမှာရိုးရိုးကြွက်မရှိကြပေ။ အဲဒီကောင်လေးက porn ထိတွေ့သူ့ကိုရန်လုပ်နေခဲ့ရာမှာဒုက္ခဆင်းရဲထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်ပိုပြီးပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဒီဆွေးနွေးရန်အဖြစ်ကျနော်တို့ကိုသူတို့အရေးယူမညျဖွစျကွောငျး, ထိုကောင်လေးပြုသကဲ့သို့, မြျှောလငျ့နိုငျ။ ယနေ့ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အအေးကြက်ဆင်သွားသောသူတို့အဘို့အလုပ်လုပ်ခံရဖို့ပုံရသည်ကြောင်းသတင်းပို့သူကိုလူပျိုတို့, တက်သည်ပေါက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ အားလုံးကတော့စှဲအတူတူပြင်းအားဖြစ်ကြ၏; တချို့ Reversible လုပ်ပုံရသည်။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ချစ်ခြင်းအပေါ်သက်ဆိုင်ရာနေကြသည်ပင်ရှိရာတစ်ဦးအသုံးပြုခြင်းကို-It-or-ဆုံးရှုံး-ကြောင့်ဦးနှောက်, ပါပဲ။ ဤသည်ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ဤယောက်ျားလေးများရှည်တစီးကိုကျော်ပုံသဏ္ဍာန်သာသူတို့ယူအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ, ပေးထားသောအချိန်က, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ, အောင်ဆိုလိုသည်။ တစ်ဦးတည်းကြောင်းသဘောပေါက်, သူတို့ကိုယူနိုင်ရန်ပညာအရှိဆုံးသင်တန်းကဘာလဲဆိုတာစဉ်းစားပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းဖို့ဖြစ်ပေါ်စေဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။
ကနေစိတျအပိုငျးအတွက် Excerpted ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်, 2007, မူပိုင်ခွင့်©-Norman Doidge, 2007 ။